Akụkọ - Ugogbe Ugogbe Anya nke Udiri Ichoro Ihu n’Ọdịnihu?
N'otu oge, anyị niile nwere mmetụta na ụmụ agbọghọ buru ibu bụ iko na-atụ ụjọ, na-enwe mmetụta nzuzu na enweghị ọchị. Agbanyeghị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ụdị ndị na-efe efe na-akwado ha, iko ndị mmadụ na-achọghị na mberede ghọrọ ihe ejiji wee bụrụ ọhụụ ọhụrụ.
Girlsmụ agbọghọ nwere anya anọ na-eyiri iko naanị na-elekwasị anya na arụmọrụ, mana ugbu a, ha elekwasị anya na ụdị ejiji. Ọbụna ha na-akwadebe ụdị iko dị iche iche n'ụlọ iji kwekọọ n'ụdị ụbọchị.
Nke a geek na na na na ada ka si 2019 ka 2020. Mgbe ị na-ahụ na gucci, ka Prada, fendi, chloe, na ọbụna Chanel na-akwado, m kwere na nke a na-emekarị nke ewepụghị iko bụ n'ezie unstoppable.
N'ezie, ọ bụrụhaala na a họpụtara ngwa ndị ahụ nke ọma, ọ ga-agbakwunye isi na ọdịdị ahụ. Ya mere, dị ka nwa agbọghọ ejiji, ị ga-ebu ụzọ mụta ịhọrọ etiti dabara adaba maka onwe gị.
Ọ bụrụ na ụmụ mmadụ nwere ike ịghọta teknụzụ ezumike na akwụkwọ akụkọ sayensị "atọ-ahụ", ụdị ugogbe anya maka anwụ ị chọrọ iyi n'ọdịnihu?
Kedu ụdị ugogbe anya maka anwụ ga-abụ ihe na-adịghị mma ọbụlagodi n'ọdịnihu, na-eduzi omume ahụ mgbe niile, ọbụnadị karịa oge?
N'oge na-adịbeghị anya, e nwere ihe nkiri akụkọ sayensị abụọ pụtara ìhè, "Blade Runner 2049" na "Ready Player One". Ma ihe nkiri na-akọwa "ụwa ọdịnihu", mana ọdịnihu ụwa nke egosipụtara na fim abụọ ahụ dị iche. nke.
Na ụwa nke "Ready Player One", ụmụ mmadụ adabere kpamkpam na ahụmịhe kachasị elu nke VR dị elu wetara.
Inwa dị na "Blade Runner 2049" bụ onye mmanya na-egbu na onye tọgbọrọ n'efu, na teknụzụ ime ihe niile emeela ka owu na-ama mmadụ. Igwe anwụ ugogbe anya maka anwụ ga-eme ka anyị mata, avant-garde bụ njirimara ya.
N'ime ihe nkiri na ọrụ telivishọn nke cyberpunk, ụwa ọdịnihu na-akụkarị afọ n'ala. N'ọdịnihu obodo nwere skyscpers na-ele anya na ha nwere akụkụ atọ, enwekwara ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị bi na ala na mpaghara mmekọrịta na-ebi n'okporo ámá ndị dị warara. Teknụzụ dị elu, ọmarịcha ọkụ neon na obere mmadụ, ịhụnanya siri ike, ịkpọasị na ịkpọasị dị iche.
Mara mma na agba bụ ihe dị oké mkpa nke cyberpunk. Na ihu igwe teknụzụ, agba na-anọchite anya mmetụta dị nro na ọgaranya nke ụmụ mmadụ. DLL5333 nwere okpokoro ọla mara mma na ọmarịcha odo odo na-acha odo odo, na ọmarịcha agba ndị a na-agaghị echefu echefu.
Nnukwu ogbe nwamba pusi nwere uto uto nke 80s alọghachila ọzọ. Na mgbakwunye na egwuregwu na ọmarịcha mmetụta, iko nwamba nwere mmetụta nke imezi ihe ndepụta ahụ. A na-eji usoro kpakpando chọọ mma karịa Stella mccartney. The imewe bụ nnọọ anya-akụta na ike maa na-a pụta ìhè na udi. Y’oburu n’echiche na iko ndi anakpo monochromatic di kwa otutu, inwere ike họrọ iko achicha. Igwe iko Tortoiseshell abughi ihe ndi mmadu choro, ma nwekwa ike ime ka ndi mmadu mara ihe. Igwe iko nke otu aha ahụ sitere na onye mmebe German wolfgang proksch jikọtara ihe dị iche iche, yana caramel tortoiseshell frames na ogwe aka ọla. Nhazi ekike bara ọgaranya n'ụdị atọ, nke dabara adaba maka ụmụ agbọghọ nwere ejiji nwere myopia.
Dịka nwatakịrị nwanyị hụrụ ịma mma n'anya, ma e wezụga arụmọrụ ya, ejiji dịkwa oke mkpa mgbe ịzụrụ iko, nri? Ọ bụrụ na ị kwenyere, mgbe ahụ, okpokolo agba ndị a chọrọ maka gị bụ naanị maka gị! Uwe mkpuchi anya maka nka site na London na-elekwasị anya na iko ndị nwere ejiji na nka. A na-eji ọla edo edo edobere anya nke pusi na aka nri ya na akụkụ aka ekpe ya, ụdị a dịkwa nro. Na mgbakwunye na n'ihi nka, oge a Alexander McQueen, Gucci, Chloe na ụdị ndị ọzọ bidokwara ọtụtụ ihe eji achọ mma mma,
Ọmụmụ nke iko aviator nwere njikọ chiri anya na ndị ọkwọ ụgbọ elu. Ọ bụ enyoanya nke ụlọ ọrụ Bausch & Lomb rụpụtara maka ndị ọkwọ ụgbọ ala megide stratosphere. Ọ na - ewepụta ụdị ihe anya mmiri ọfụma ma jiri ọla kọpa dị fechaa. N'adịghị ka atụmatụ elu nke okpokoro nwamba, oghere nke Aviator Glasses nwere atụmatụ na-ada ada n'akụkụ abụọ, nke ga-eme ka ndị mmadụ lekwasị anya na ọkara nke ihu. Yabụ, ọ dịkwa mma maka ụmụ agbọghọ nwere agba dị nkọ, ndị nwere ihu dị mkpụmkpụ ma saa mbara kwesịrị ịnwale kacha mma ha zere.